Posted by Pannavamsa / 7:09 AM /
ဒိန်းမက်နိုင်ငံမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာမိသားစုများ စုပေါင်း၍ ဗုဒ္ဓနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကုသိုလ်ကို (၉. ၅. ၂၀၁၅) ရက် စနေနေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်၊ ရာသီဥတု အေးပြီး မိုးတဖွဲဖွဲကျနေတဲ့ ကြားထဲက ကျောင်းတော်သို့ အရောက်လာကြပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို ပြုလုပ်ကြပါတယ်၊ ဒိန်းမက်နိုင်ငံမှာ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓရံသီ ကျောင်းတော်ကို ၁၄. ၈. ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ စတင်တည် ထားခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကျောင်းတော်ကို ပီနန်းဆရာတော်ကြီးနှင့် လန်ဒန်ဆရာတော် ဦးဥတ္တရ တို့က ဦးစီးပြီး ဒိန်းမက်နိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားများ စုပေါင်းကာ တည်ထောင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင် ကျောင်းတော်ကြီးသာ ရှိပြီး နေထိုင်သီတင်းသုံးမည့် ရဟန်သံဃာကား အမြဲမရှိဘဲ ခေတ္တသီတင်းသုံးသည့် ဆရာတော်သာ ရှိပါသည်။ ဒိန်းမက်ရောက် မြန်မာ မိသားစုများ အတွက် မွေးနေ့ပွဲများ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် သက်ဆိုင်သော နေ့ထူးနေ့မြတ်ပွဲများ၊ နှစ်သစ်ကူးပွဲများတွင် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းသို့ လာရောက်ဖြစ်စေ၊ မိမိတို့နေအိမ်သို့ ဆရာတော်များကို ပင့်ဖိတ် ၍ဖြစ်စေ၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်များ ပြုလုပ်ချင်ကြကြောင်း သို့သော် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် သီတင်း သုံးတော်မူမည့် ရဟန်းသံဃာများ မရှိခြင်းကြောင့် မပြုလုပ်ဖြစ်ကြဘဲ ခေတ္တခဏ ကြွရောက်တော် မူလာကြသည့် ဆရာတော်များ ရောက်ရှိလာ ကြသည့်အခါမှသာ ကုသိုလ်ကောင်းမှု များ ပြုလုပ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြကြပါသည်။
ဒိန်းမက်မှာရှိသည့် ဗုဒ္ဓရံသီ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းခြံသည် ၁ . ၀၀ ဧက ကျော် ကျယ်ဝန်းပါသည်။ထိုကျယ်ဝန်းသော ခြံဝန်းတွင် ကျောင်းဆောင်ကို ဆောက်လုပ်ထားသဖြင့် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်လိုသူ အတွက် အလွန်သင့်လျော်လှပါသည်။ ဒိန်းမက်မှာ နေထိုင်ကြသည့် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ သည် စနေနေ့တိုင်း ဗုဒ္ဓရံသီ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ လာကြပြီး ဆွမ်းခဲဖွယ် ဘောဇဉ်များ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းခြင်း၊ သီလခံယူဆောက်တည်၍ တရားဓမ္မများ နာယူခြင်း၊ ပဌာန်း ပစ္စယနိဒ္ဒေသ ပါဠိတော် များကို စုပေါင်းရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်တို့ကို ရယူလေ့ရှိကြပါသည်။ ထို့နောက် တစ်နေ့တာ ပြုလုပ်အားထုတ်ခဲ့ကြတဲ့ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ ကုသိုလ်တို့၏ အဖို့ဘာဂကို ကိုယ်စောင့်နတ်၊ ကျောင်းစောင့်နတ် တို့ကို အစထား၍ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံ ကျင်လည်ကြကုန်သော သတ္တ၀ါ အားလုံးတို့အား ရေစက်သွန်းချ၍ အမျှအတန်းများ ပေးဝေကြပါသည်။
နံနက် ၁၀း၀၀ နာရီခန့်မှ ရောက်ရှိလာကြတဲ့ ဗုဒ္ဓရံသီ မြန်မာမိသားစုများသည် ညနေ ပဌာန်းရွတ် ဖတ်ပူဇော်ပြီးသည့် ၇း၀၀ နာရီအထိ ကျောင်းတော်မှာပင် နေကြပြီး ပဌာန်ဒေသနာတော် ရွတ်ဆိုပူဇော် ပြီးမှသာ အတူတူ ပြန်သွားလေ့ရှိကြပါတယ်။ အချို့ရပ်ဝေးမြို့များမှ လာရောက်ကြသူများသည် ကျောင်းမှာ ညအိပ်တည်းခိုကြပြီး နောက်ရက်မှ ပြန်လေ့ရှိကြပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှိတဲ့အတွက် ကုသိုလ် ကောင်းမှုများ တိုးပွားရကြောင်းနဲ့ မြန်မာမိသားစု တစ်ပတ်တစ်ခါ တွေ့ဆုံကြရကြောင်း၊ ကလေးငယ်များ အချင်းချင်း ပိုပြီး ရင်းနှီးလာကြကြောင်း ပြောပြကြပါသည်။